Jiri Iwu - ASFO Store
a. Site n'iji ya www.asfo.store Weebụsaịtị, onye ọrụ ahụ na-ewere echiche nke gụrụ, ghọtara ma kwenye na Iwu Nzuzo yana Usoro eji dị ugbu a.
b. Onye ọrụ ahụ na-ahụ maka idobe ozi nkeonwe ya mgbe niile, nke zuru oke ma bụrụ nke emelitere. Usalọ ọgwụ Sousa Torres SA enweghị ikike ọ bụla, a gaghịkwa atụle ya maka iwu maka ozi ọ bụla ndị ọrụ na-ebugharị.
c. Iji webụsaịtị Sousa Torres Pharmacy pụtara na ndị ọrụ chere na ha nwere afọ ole iwu kwadoro maka iji ọrụ niile, na-abụkarị ndị tozuru oke maka ịzụ ahịa na ịkwụ ụgwọ na ya, yana ịkwụ ụgwọ na iwu akwadoghị maka omume ha niile na site na weebụsaịtị.
d. Onye ọrụ ahụ emebere nkwa iji ya www.farmaciasousatorres.com webụsaịtị naanị maka ebumnuche ezubere na site na ngwa na ngwaọrụ dịnụ, na-enweghị ịnwa iji ya mee ihe na-adịghị mma, site na ma ọ bụ maka ebumnuche iwu na-akwadoghị.
e. Usalọ ọgwụ Sousa Torres ka edobere ikike igbochi iji ọrụ ma ọ bụ atụmatụ, yana igbochi na iwepu ozi nkeonwe, na ama ama, n'ọnọdụ ndị na-anaghị erube isi na iwu ma ọ bụ omume na-ezighị ezi nke onye ọrụ ahụ, yana ịkọ akụkọ n'uzo na ezighi ezi. ma ọ bụ omume na-ezighi ezi megide ndị ọchịchị kwesịrị ekwesị, mgbe ọdabara.
Ozi niile dị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ozi ọ bụla nke ndị ọrụ anyị na-enye site na ekwentị, email, faksị, leta ma ọ bụ ụzọ ọ bụla nke nkwukọrịta, nwere ebumnuche azụmaahịa azụmahịa nke ịkọwa na inyere onye ahịa aka mgbe ị na-azụ ahịa, ghara ịchụpu onye ọkachamara ma ọ bụ ndụmọdụ ahụike, mgbe ọdabara.
Ihe onyonyo ngwaahịa na webụsaịtị anyị nwere ike ọ gaghị abụcha otu na ngwaahịa a nyefere ndị ahịa. Onyinye nyere ngwaahịa banyere ngwaahịa a, yabụ anyị agaghị akwụ ụgwọ maka ozi enyere anyị aka.
Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ agaghị adịte aka, a ga-ejide iwu onye ahịa ya wee jide ya ruo mgbe enwere ike ịhazi ya. A ga-agwa Onye ahịa na email edebanyere aha mgbe nke a mere. Bụrụ na iwu gị gụnyere ngwaahịa nke dị ozugbo na adịghị adị, ị nwere ike kewaa usoro gị. Iji mee nke a, biko kpọtụrụ Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị ka ewee nye iwu abụọ iche iche.
Ọpụrụiche & Akwụkwọ ego
Nwere ike ịhụ oge na oge a www.asuafarmaciaonline.pt ụlọ ahịa na ọpụrụiche ụlọ ahịa na vouchers bidoro na weebụsaịtị.
Iwu Maka iji vootu:
• can nwere ike iji otu kwa izu;
• Ntụziaka ndị ọzọ (ozi) ga-apụta mgbe ị na-etinye koodu mkpọchi ego na ụgbọ ibu;
• Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ, egbula oge ịkpọtụrụ Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị.
www.asuafarmaciaonline.pt Echekwara ụlọ ahịa maka ikike ịgbanwe ya ọpụrụiche na amụma vouchers n'oge ọ bụla.
VAT na ricnye ọnụahịa
Ọnụahịa ngwaahịa na weebụsaịtị anyị gụnyere VAT. Purchazụta ndị ahịa mere na mpụga European Union adịghị n'okpuru VAT. Enwere ike inwe mkpa maka ịkwụ ụgwọ ọrụ ndị ọzọ na ụgwọ nzipu ozi, dabere na ngwaahịa na mpaghara nnyefe ya. Ahịa nọ n'okpuru mgbanwe na-enweghị ọkwa izizi.
Ịzụta ma ire
a. Nkọwapụta, ntinye, ụgwọ ịkwụ ụgwọ na nlọghachi iwu nke onye ọrụ nyefere site na webụsaịtị ASFO ka akọwara na Olee otú ịtụ, Yingzụta ọgwụ, Ntughari iwu, ịkwụ ụgwọ ụzọ na Celkagbu, Mgbanwe na nlọghachi akwụkwọ.
b. Usalọ ọgwụ ọgwụ Sousa Torres na-etinye onwe ya n'ịgba mbọ iji hụ na ozi niile weebụsaịtị kwuru dị ka nke ziri ezi ma bụrụ nke emelitere, kachasị ọnụ, njirimara, nnyefe na ụzọ ịkwụ ụgwọ, nkọwa, ngosi ma ọ bụ ndị ọzọ. Na agbanyeghị, enwere ike inwe njehie na-atụghị anya nwa oge dịka mgbanwe oge na ọnọdụ ọrụ, enwu ọkụ ma ọ bụ nchinchi ndị ọzọ, mgbanwe ngwa ahịa na-eweta mbupu mberede, ọdịda kọmputa ma ọ bụ itinye aka nke ihe ndị a na-amaghị na Sousa Torres Pharmacy.
c. N'ihi nke a, oge ọ bụla njehie ndị a kpọtụrụ aha n'elu ma ọ bụ nnyonye anya ndị ọzọ nke usoro nke onye ọrụ ahụ mere ma ọ bụ na iwu echere, ọkachasị na-agbanwe ọnụahịa na nnyefe ikpeazụ ma ọ bụ ọnọdụ ịkwụ ụgwọ, Sousa Torres Pharmacy ga-akpọtụrụ onye ọrụ ozugbo ozugbo. enwere ike, site na email ma ọ bụ ekwentị, ịkọwa otu ma kọwaa mgbanwe ndị dị otú a wee chọpụta nnabata nke ọnọdụ ọhụrụ.
d. Usalọ ahịa ọgwụ Sousa Torres na-arịọ onye ọrụ ahụ ka ọ kọọ akụkọ njehie nke mmadụ nwere ike ịchọta, yana izipu nke ntinye ma ọ bụ nzaghachi site na email (info@asuafarmaciaonline.pt) ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla iji kpọtụrụ anyị gosipụtara na weebụsaịtị, nke anyị ga-achọ Gbalịa ịzaghachi n'ụzọ kachasị mma yana ozugbo enwere ike.
Njedebe nke nkwekọrịta
Nonnabata usoro iwu nke ugbu a pụtara ịkwụsị ojiji nke weebụsaịtị Sousa Torres Pharmacy, na ndị ọrụ edebanyere aha nwere ike ịkagbu ntinye na ntinye nke Usoro site na iwepu Akaụntụ Nkeonwe, dị ka akọwara na Nzuzo Nzuzo.